Zimbabwe's sound of hope - Cathy Buckle
At four thirty in the morning I stood outside under a star filled sky, a fiery necked nightjar was calling: “Good Lord Deliver Us,” its voice clear and consistent in the darkness. This nightjar, known as the Litany Bird has long been the sound of hope and determination for me, the song of Zimbabwe calling out for deliverance. With the call of the Litany Bird in my mind I am pleased to announce that I have just released my new book, Zimbabwe’s Timeless Beauty. This book is an evocative collection of photographs and stories showing the enduring beauty of Zimbabwe: kopjes and mountains, waterfalls and rivers, wild places and beautiful creatures, red and orange sunsets, pink and apricot sunrises. I hope through this book you will walk in my shoes, feel the warmth of the sun in a bright blue sky, see the golden grass swaying in the warm breeze, hear the call of the nightjar at dawn and the grunts of hippos in the river at dusk and be transported into the very heart and soul of Zimbabwe. For a preview please watch and share the YouTube video clip https://www.youtube.com/channel/UCcJZuWhKvj0ulR0DnVms-1Q or visit my website https://cathybuckle.co.zw/